QUB အနီးရှိ INSTAGRAMMABLE ကော်ဖီအစက်ခြောက်ခု - သတင်း
QUB အနီးရှိ Instagrammable ကော်ဖီအစက်ခြောက်ခု
ငါတို့ကအမြဲတမ်းပြောနေကြတာ။ ငါတို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကော်ဖီကိုငါတို့လုပ်သမျှအတိုင်းသုံးသင့်သလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Alas, Barista နှင့်ကျောင်းသား၏ချေးငွေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုမနက်လည်စာအတွက်ဖြုန်းတီးသောကံမကောင်းစွာသောကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဘဲလ်ဖတ်တွင်အများဆုံး Instagrammable ကော်ဖီဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များစာရင်းကိုငါဖန်တီးလိုက်သည်။
ပိုပြီးအရေးကြီးတာကလတ်ဆတ်တဲ့အချိန်မှာ Limelight မှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့မင်းရဲ့ Instagram၊ သစ္စာစောင့်သိသူတွေကတော့ OMG ဘယ်မှာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ filter နှင့် espresso တို့ကိုခေါ်ဆိုပြီးအရသာကောင်းသည်။ ညနေ ၂ နာရီအထိကော်ဖီနှင့်ကိတ်မုန့်များကိုညနေ ၃ နာရီအထိစားသုံးခြင်း။
မျှဝေသည် စတင်တည်ထောင်ထားသောကော်ဖီ (@establishedcoffee) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့နံနက် ၁း၀၀ နာရီ PDT တွင်
ဘဲလ်ဖတ်ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဘုရားရှိခိုးကျောင်းရပ်ကွက်၌ဤအနည်းငယ်မျှသာ, စက်မှုစတိုင်စားသောက်ဆိုင်များကျိန်းသေသင့်ရဲ့ insta ပုံပြင်များအတွက်တစ် ဦး boomerang ကျိုးနပ်သည်။
ဒေသအလိုက်ထွက်ရှိသည့်အစားအစာများ၊ ကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်ထားသောကော်ဖီနှင့်အေးမြသည့်လေထုများနှင့်အတူဤနေရာသည်နေရာဖြစ်သည်။ ထူထောင်ထားသောကော်ဖီသည်မြို့တွင်းနှင့်အနီးဝန်းကျင်ရှိလူများအတွက်ရေပန်းစားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်မကြာသေးမီကသင်သွားယူရန်အဖြူရောင်သို့မဟုတ် Guilt Trip ဒိုးနတ်ကိုဆွဲယူနိုင်သည့်ယူဆောင်သွားဆိုင်ခန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းည ၁ နာရီမှညနေ ၄ နာရီထိသူတို့၏ 'Pie and Drip' ပွဲကိုသင်မွေ့လျော်မနေပါနှင့်၊ သင်ကအရသာကောင်းသော Pie နှင့်တွဲဖက်ယိုကော်ဖီစားနိုင်သည်။ သင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိကော်ဖီမှုန့်များနှင့် QUB Rahs များအားသင်၏မျက်နှာ၌အဓိကကျသည်။
2. Curated မီးဖိုချောင်နှင့်ကော်ဖီ
ပြပွဲဆက်မသွားနိုင်သည့်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ Blue (Da Ba Dee) သည်အီတလီဂီတအဖွဲ့ @ Eiffel65gram ၏သီချင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Billboard Hot 100 ဇယားတွင်နံပါတ် ၆ နေရာရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် @acmecups_uk ၏အပြာရောင် cappuccino ဖြစ်သည်။ ။ Curated မီးဖိုချောင်နှင့်ကော်ဖီ။ အိုင်ယာလန်စားသောက်ဆိုင်ဆု ၁၉၉၉ တွင် Co. Antrim တွင်အကောင်းဆုံးကဖေးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်များမှပြင်ဆင်ထားသောမီနူးတစ်ခုဖြင့်လူမှုရေးနှင့်စပ်စုလိုသောနံနက်စာ၊ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့်ကော်ဖီ။ ။ ။ #cafelife #foodporn #foodblogfeed #feedfeed #instayum #eattheworld #cookbook #cookbooks #cookbookaddict #coffeeholic #coffeesesh #coffeeaddict # coffeeshots # coffeegram #manmakecoffee # cathedralquarter #belfast #visitbelft #landa ။ ဓာတ်ပုံအကြွေး: @ryanproctorproductions
မျှဝေသည် Curated မီးဖိုချောင်နှင့်ကော်ဖီ (@crtdktchn) မတ်လ ၁၄ ရက်၊ ညနေ ၅း၉၉ တွင် PDT
Curated Kitchen သည်အခြားသောအချက်အပြုတ်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘုရားရှိခိုးကျောင်းရပ်ကွက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ Indie Baristas နှင့်အစားကောင်းတဲ့အစားအစာကိုအဓိကထားတဲ့ menu နဲ့အတူသင်ဟာမထည့်ခင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံယူဖို့ဟင်းလျာများကိုသင်သေချာစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သူတို့၏မီနူးကိုသင်ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ဝိုက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ချက်ပြုတ်စာအုပ်များမှချက်ပြုတ်နည်းများမှကောက်ယူထားပြီးအပတ်စဉ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူတို့မှာသက်သတ်လွတ် / သက်သတ်လွတ်စားစရာတွေများတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီနေရာဟာမင်းရဲ့စက်ရုံအခြေပြုသူငယ်ချင်းများနှင့်သင်နှင့်အတူသွားရန်အတွက်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ကျိန်းသေဖြစ်သင့်သည်။
12 နှင့် 13 ပိတ်လိုက် !! ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နှင့်စနေနေ့ ၁၃ ရက်နေ့တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဆိုင်များကို ဖြတ်၍ မပိတ်ခင်အရသာရှိသောအစားအစာနှင့်ကော်ဖီတစ်ခုခုကို ၀ ယ်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သင်လွတ်သွားလျှင်မကြောက်ပါနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖွင့်ပါ။ #holidays
မျှဝေသည် အထွေထွေကုန်သည်များ 4:18 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 11, 2019 ရက်တွင် (@generalmerchants)
ဒီနေရာဟာငါ့ဘဝမှာငါချိုးဖောက်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Avocado ကိုရောင်းလိုက်တယ်။ ငါ Avocado ကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်တယ်ဆိုတာအတိအကျမသိပေမယ့်ဒီနေရာဟာသင့် Instagram Instagram ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်။
Newtownards လမ်းနှင့် Ormeau လမ်းနှစ်နေရာရှိသည့်တိုင်ဤကော်ဖီဆိုင်များတွင်ထိုင်ခုံရရန်ခဲယဉ်းသည်။ သူတို့၏ဆွဲထားခြင်းတောင်းများနှင့်သြစတြေးလျ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်တောင်နှင့်အရှေ့ဘဲလ်ဖတ်၏မနက်စာစားသူများအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
သငျသညျတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မနက်လည်စာရှာနေလျှင်ငါရက်သတ္တပတ်တွင်သွားအကြံပြုဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်, ဤအရပ်သည်သင်၏ 9am ဟောပြောပွဲကျော်သွားဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဆင်ခြေ။ သင်၏ Mac ကိုထပ်တိုးထားသောဗေဒတန်ဖိုးများကိုယူဆောင်လာပါကသင်သည်အရာရာကိုလိုက်မီမည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စေရန်
မွန်းလွဲပိုင်း။ ညစာ social.✌ 02890463828 အရှေ့ 02895081587 lisburn လမ်း #freightbelfast #straighttofreight #belfast #local #instabelfast #brunch #supper # လူမှုရေး #cslewissquare #lisburnroad #jackcoffeebar #isrit
မျှဝေသည် ကုန်ပစ္စည်းဘဲလ်ဖတ် (@freight_belfast) ဇန်န ၀ ါရီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀း၄ ရက်၊
ဒီနေရာကိုသင်၏ Instagram အကုန်လုံးတွင်သုတ်လိမ်းရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအနည်းငယ်မျှသာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အတွင်းပိုင်း, စိမ်းလန်းသောအများကြီးနှင့်အတူအလေးပေးကြောင့်သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှကော်ဖီကနေအထင်အရှားစေသည်။ ၎င်းသည်ရူပဗေဒဆိုင်ရာအချက်အချာကျရုံသာမက Sourdough Bread, Avocado နှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်၏ထူးခြားထင်ရှားသောကော်ဖီအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်။
သူတို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအာရှမှုတ်သွင်းခံမီနူးနှင့်လူကြိုက်များသော Pop-up ညများနှင့်အတူ Freight သည်ကော်ဖီဝါသနာရှင်တစ် ဦး လိုချင်သည့်အရာအားလုံးရှိပြီးသင်၌ပင်ပိုင့်တစ်ပင်ရှိနိုင်သည်။ နိုင်ပြီ။
အဘယ်အရာကိုသန်းကြွယ်သူဌေးအောင်သွယ်အပေါ် destination နှင့် Rachel မှဖြစ်ပျက်
တနင်္လာနေ့နံနက်လောင်စာ… - အပတ် ၂ သည် Ormeau & Lisburn Rd တွင်အကူအညီတောင်းရန်ထွက်ပါ။ ဒီနေ့၊ မနက်ဖြန်နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့! - သင်၏အကွာအဝေးကိုစောင့်နိုင်ပြီးသင်၏ကော်ဖီအတွက်တန်းစီသောအခါမျက်နှာမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ - သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကိုကာကွယ်ပါ။ သင်ထိုင်နေပါကသင်နှင့်သန့်ရှင်းရေးသန့်ရှင်းရေးစက်ရုံအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းများအားလုံးရှိသည်။ မေးခွန်းများ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ - Perspex ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ - #kaffe
မျှဝေသည် ကော်ဖီအို (@kaffeo) ၂၀၁၂၊ သြဂုတ် ၁၀ ရက်၊ နံနက် ၁:၂၇ နာရီ၊ PDT တွင်
ခိုင်မာသည့်တေးဂီတလွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် Nordic စတိုင်သည်သင်၏ Instagram ကိုလိုအပ်သည့် hygge vibe ကိုပေးလိမ့်မည်။
Ormeau၊ ရုက္ခဗေဒနှင့် Donegall ရင်ပြင်ရှိနေရာများနှင့်အတူဤနေရာသည် uni တွင်ခက်ခဲသောနေ့ပြီးနောက်စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်အေးအေးဆေးဆေးသွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ကော်ဖီကပထမတန်းစားဖြစ်ပြီးကဖေးတွေဟာကိုပင်ဟေဂင်မှလှပသောဒီဇိုင်းနှင့်ဗီနိုင်းများစွာဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ သင်သည်သူတို့၏ beanies နှင့်နွေးထွေးစွာနေလိုလျှင်သို့မဟုတ်သူတို့၏ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်လိုလျှင်သင်၌ပင် BT9 ကော်ဖီအကျွမ်းတဝင်ရှိသူကမ္ဘာကိုပြသနေလျှင်သူတို့သည်သူတို့၌ဆိုင်ရှိသည်။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးမိန်းကလေးများ Boob နှင့်အတူလုပ်ဖို့
ညစ်ပတ်ပေရေနေသောတိရိစ္ဆာန်များကိုပြန်ကြိုဆိုပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားရင်ပြင်ဖွင့်လှစ်ယနေ့။ ၈.၃၀ ကနေကျွန်ုပ်တို့ပြိုလဲချိန်အထိရောက်နေတယ်။ သင်၏စျေးဝယ်ခြင်းအတွက်ကြိုတင်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းနေရာများတွင်လောင်ကျွမ်းရန်ကော်ဖီ၊
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@thepocketcoffee) ဇွန် ၁၁ ရက်၊ ည ၁၁း၃၀ နာရီ PDT တွင်
ဘုရင်မကြီးရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကအမြဲတမ်းတစ်မိုင်အချင်း ၀ က်အတွင်းမှာအဖြူရောင်ကောင်းသောအဖြူရောင်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် Pocket ကဒီစာရင်းထဲမှာနောက်ဆုံးရေးသားဖို့လိုတယ်။ ဒါဟာတက္ကသိုလ်လမ်းကဖီး QUB ဆန့်ကျင်ဘက်သည်နှင့်တကယ့်ပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်ဇာတ်ဆောင်ခံစားမှုရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့မီနူးကအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မနက်လည်စာရွေးစရာတွေအများကြီးရှိပြီး uni မှာနေ့လည်စာစားရန်အတွက်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်မကြာသေးမီကမြို့လယ်ခေါင်တွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထက်ပိုကြီးသော်လည်း၎င်း၏နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါနှစ် ဦး စလုံးသောအရပ်တို့ကိုမလုံလုံလောက်လောက်ကဖိန်းဓာတ်သင့်ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်နှင့်သင်၏မီးမောင်းထိုးပြထည့်သွင်းခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့ Insta ပုံပြင်နှင့်အတူငါအာမခံနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံး Image: @thepocketcoffee